Ny lahatsoratr'i Elma Beganovich momba ny Martech Zone
Lahatsoratra nosoratan'i Elma Beganovich
Ramatoa Beganovich no mitarika A & Eny ezak'izy ireo amin'ny fananganana ny lisitry ny mpiara-miasa sy mpanjifa malaza eran-tany. Ny sehatry ny fahaizany dia misy ny famaritana ireo andraikitra azon'ny A&E ho an'ny marika isan-karazany amin'ny indostria isan-karazany, ary koa ny fampivelarana ny teny sy ny fari-piainan'ireo fiaraha-miasa ireo.
Alakamisy Oktobra Oktobra 15, 2020 Alatsinainy Janoary 18, 2021 Elma Beganovich
COVID-19 dia nanova ny fomba fiantsenanay. Miaraka amin'ny areti-mandringana any ivelany, misafidy ny hijanona ao ireo mpanjifa ary hividy entana amin'ny Internet fa tsy. Izany no mahatonga ny mpanjifa mirona amin'ny influencers bebe kokoa amin'ny fomba fanaovana video amin'ny zavatra rehetra manomboka amin'ny fanandramana lokomena ka hatramin'ny filalaovana lalao video tianay. Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny vokatry ny areti-mifindra amin'ny marketing influencer sy ny vidiny dia jereo ny fandinihana vao haingana. Fa ahoana no fiasan'izany amin'ireo zavatra izay tsy maintsy jerena